India: Google Doodle inoratidza musi we 971th wekuberekwa kwePezhiya nyanzvi yemasvomhu Omar Khayyam | India News - TELES RELAY
HOME » pasi rose »India: Google Doodle inoratidza musi we 971th wekuzvarwa kwePezhiya nyanzvi Omar Khayyam | India News
NEW DELHI: Google Doodle yakanyorwa musi weMugovera yeChNUMXth anniversary yekuberekwa Omar Khayyam nyanzvi yemasvomhu anozivikanwa, mudetembi, mufilosofi uye nyanzvi yemapurisa.
Khayyam, anozivikanwa nokuda kwebasa rake pakusarudzwa uye kusarudzwa kwekubata cubic, akanga ariwo nyanzvi uye nyanzvi yakakurumbira.
Khayyam ichinyanya kuzivikanwa mashematical genius. Akazvarwa muNishapur, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweIran, uye akapedza nguva yakawanda yehupenyu hwake pedyo nevatongi veKarakhanid neSeljuq, zvapupu zve First Crusade .
Basa rake pakugadzirisa nekugadzirisa cubic equations chinhu chinoshamisa nokuti akapa geometric sarudzo kuburikidza nekubatana kwekoni.
Khayyam ndiye aiva wokutanga kupa nzira yakawanda yekugadzirisa cubic equations. Kunyange zvazvo asingafungi midzi isina kunaka, nzira dzake dzakakwana kuti magetsi awane zvose midzi chaiye (yakanaka kana kuti yakaipa) ye cubic equations.
Uyewo mu2012, Khayyam's 964 e zuva rekuberekwa rakapembererwa neGoogle ne doodle chaiyo yakagamuchirwa zvakanaka nevashandisi.
Mukuwedzera kuIndia, kuonekwa kwechidonho ichi chinowedzera kuRussia, kuMiddle East, kumaodzanyemba kweAfrica, United States neChile. Nhamba yezvinyorwa zvegore rino yakakura kudarika iyo ye2012, inowanikwa kuMorocco, Algeria, Libya, Egypt, muSaudi Arabia muIraq, muOman uye muAfghanistan.
Ita pfungwa dzechisarudzo 2019 ku Lok Sabha uye migumisiro ye23 May naIYO. Titevere isu kuti titevere nhau dzekupedzisira, mararamiro ehupenyu, nhepfenyuro yekuongorora uye yakadzama data analysis. Tevera mararamiro zvikwata zvechisarudzo iyo yakakura miitiro uye zvinyorwa zvinokurumidza zvakanyanya pazuva rekuverenga nehukuru ruzivo ruzivo rweIndia.
Marokero: Simba reMorocco rakaongororwa neIEA